एजेन्सी, ५ असार । अष्ट्रियाको भियनामा संसारकै पहिलो सेक्स विद्यालय खोलिएको छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई असल र राम्रा प्रेमी बन्न सिकाउने दावी गरेको छ । तर, विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि विद्यार्थीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेक्स पावर बढाउन यो फलको जुस खानुहोस्
फ्रान्समा १५ वर्ष पुगेपछि सहमतिमा सम्भोग गर्न पाइने, कुन देश कति उमेरहद ?
बोल्न, कराउन नदिई पाँच जनाद्वारा सामूहिक बलात्कार, बाह्रदिनको बीचमा दुई बलात्कृत
जान्नै पर्ने सेक्स कला
पत्याउनै नसकिने सेक्स सम्बन्धी १२ तथ्यहरू
चुरोटको लत छ, एकपटक यो पढ्नुहोस्
‘२०३० सम्म यौनाङ्ग काटिने महिलाको संख्या ६ करोड ८० लाख पुग्छ’
यौन इच्छा बढाउन खानुहोस् यस्ता खानेकुराहरु
यौन जीवन, स्वास्थ्य
महिनावारीको समयमा सम्भोग गर्नु सही कि गलत ?
एकदमै अनौठा छन् यी देशमा सेक्ससम्बन्धी कानुन, पढेर हुनुहुनेछ हैरान
शुक्रनाशक कन्डम कत्तिको प्रभावकारी !
किन १६ देखि २४ वर्षका युवाहरु नै कन्डमको प्रयोग गर्दैनन् ?
सेक्स पावर बढाउन यसो गर्नुस्
सेक्स सम्बन्धी १७ तथ्य, जुन तपाईलाई पत्याउनै गाह्रो लाग्न सक्छ
कस्मेटिक अङ्ग, ध्यान भङ्ग !
सेक्स लाइफ रोमान्टिक बनाउन अपनाउनुहोस् यी खास टिप्स